We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျတော်တို့လွှတ်တော်ကကြိုဆိုနေပါတယ်...ဆိုတဲ့ဦးသိန်းစိန်အင်တာဗျူးနှင့် တိုကျိုရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဆန္ဒပြ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျတော်တို့လွှတ်တော်ကကြိုဆိုနေပါတယ်...ဆိုတဲ့ဦးသိန်းစိန်အင်တာဗျူးနှင့် တိုကျိုရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ဆန္ဒပြ။
နိုင်ငံအတွက် ဆန္ဒပြတာလား၊ ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဆန္ဒပြတာလား ၊ ပေါ်ပင် လုပ်တာလား ၊ ဘာဖြစ်လို. လုပ်ကြတယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးဖြစ်ကြမှာပါ ။ ဒီထက်ပိုပြီး တော့ မပြောချင်ပါ ။